Fahasalamana: mahafaty haingana ny aretina haromotana | NewsMada
« Mitsahatra hatreo ny haromonana ». Izany ny lohahevitra nentina nanamarihana ny Andro eran-tany iadiana amin’ny aretina haromotana, tany Antsirabe ny faran’ny herinandro teo. Toerana ahitana trangana haromotana matetika isan-taona ny ao Antsirabe.
Ny taona 2017, nahatratra 17 ireo olona matin’io aretina io tany an-toerana. Noho ny ezaka sy ny fanentanana anefa, efa nidina izany taha izany. Tanjona ny tsy hisian’ny haromotana intsony ao Antsirabe. Sesilany ny fanentanana, indrindra ho an’ireo miompy alika sy saka hanaovana vaksiny ireny biby ireny.
Nisy rahateo ny fanaovam-baksiny maimaimpoana ny alika sy saka nandritra ny roa andro tao Antsirabe. Hatao manerana ireo distrika fito ao an-toerana izany hiadiana ain’ity areti-mandoza ity.
Ny tena olana, betsaka ireo alika mirenireny, miteratera-poana tsy manan-tompo eny amin’ny fiarahamonina. Tsy misy mpiahy izy ireny ary loza mitatao ho an’ny fiarahamonina. Mbola vitsy ihany koa ireo manana alika sy saka manana fahazarana mitondra ireny biby ireny hatao vaksiny fa miompy tsy am-piheverana fotsiny.
Ny rangotra na kaikitr’ireny biby mafana ra ireny anefa no mahatonga ny haromotana amin’ny olombelona ary mahafaty haingana raha tsy voatsabo ara-potoana.
Tsy ao Antsirabe ihany fa saika manerana ny Nosy no tsy mbola mahataitra ny isan-tokantrano ny manao vaksiny ireny biby ompiany ao an-trano ireny. Ireo miompy karazan’alika avo razana ihany no mahavita manara-maso ny fahasalaman’ny bibiny sy tena mahavatra manao vaksiny ireny bibiny ireny.